Ny fivorian’ny Namana online — olona ny Vehivavy ankizivavy ny ankizilahy rehetra manerana an’i Italia
Isika rehetra amin’ny olon-dehibe, isika no nanao rehetra ny traikefa ary efa feno ny fanentanana ny tontolo manodidina antsika izay manontany anareo aho: inona no fianarana ho anareo tahaka ny efa tanteraka, fa tsy nanaraka noho ny zava-misy tanora aza matetika dia manana mazava hevitra teny an-dalana. Inona no hitanao unwatchable. Tiako ny safidy, fa voalohany indrindra aho dia nataony ‘ny lehilahy sy ny vehivavy’. Indraindray ny vavany ho ny raharaha raha ny rivotra, tsy azoko hoe ahoana no miasa aho fandaharana nahoana hanova ny fantsona taorian’ny segondra, saingy fantatro fa hahita azy mahatsiravina inona ny fahafolo faharoa. Foana nahatonga ahy mangovitra, fa ankehitriny dia bebe kokoa. Ny, ny mpitsara izay no antsoina hoe aho dia ho, ny zavatra lantom-peony, dia bebe kokoa. ah, ah, ary avy eo ireo mpandray anjara (amin’ny heviny fa ireo hitantara, na, ny marimarina kokoa, dia miezaka) ampy ny vola izay ataony fa ny hodi-kazo.P. ny zava-drehetra amin’ny tany izay tianao, lehibe, na ny mahatsikaiky, filozofia toy riviaggi ary, raha tianao, ho finamanana vaovao, namana vaovao ny lehilahy sy ny vehivavy, ary hiditra ao amin’ny ny zava-mitranga na mandamina ny tenanao. inona no miandry ny sonia. Ny traikefa tsara izay nizara io maraina io efa vehivavy, mba ho marina.) Izany dia tsy nitsahatra ny antsika na inona na inona, na dia ny ora lany ambany ny safo-drano ny rano izay ao Milan.).
Izaho Roberto. Ny anaram-bositra dia midika fa izy ireo alalan’ny moro ary sm avo. Velona aho akaikin’ny Roma. Misy olona mitady ny fanahy vady. Manontany tena aho hoe ahoana no ahafahan ‘ny olona ‘tovolahy iray, hahazo ny fotoana nanolana vehivavy sy ny maro hafa. Na dia mandroso ao et anao mihoatra mba hijanona ho tony ho ela isika dia manodidina ny sasany. EFA AMPY ny FANAJANA HO an’ny sary HOSODOKO intsony. Ampy ny fanajana azy mba hijanona amin’ny loko. Ampy raha oharina amin’ny sary avy any amin’ny tsy azo tsapain-tanana. Ny dikany mba ho mariky ny kibo. Fa ny tratrany sy mangataka ny modely hiala. Saingy tsy velona eto, hoy ny modely.
Izaho sy ny fanajana azy
amin’izao fotoana izao, indrisy aho nandray ny vaovao ratsy, ry namana dia ho tonga any amin’ny tsipika ny fisiana miankina amin’ny machine nandritra ny andro vitsivitsy, ny tany mbola mifatotra ho amin’ny fiainana. izany no mahatonga ahy hahatakatra bebe kokoa ny fomba mampalahelo loatra ny fifadian-kanina, ny fiainana ary na dia bebe kokoa. Efa nahita ny dimy gemelline eo amin’ny Fotoana Tena. Roa ny ry zalahy izay manana ny zavatra tovovavy ny taona, hahita fa miandry dia tsy ny faharoa i ben zanakay lahy kambana O. Vavy, hampiasa, na efa nampiasa ny voa menaka rongony mba hamelona sy poloney ny volo. Niezaka izany omaly, fa ny volo dia tonga tamiko tamin ny ratsy, dia tsy maintsy rilavarli amin’ny be ny shampoo satria izy no voahosotra hanao hoe:'(Rehefa mametraka ny volo, ilay volony lasa mamirapiratra, ny vokatra azo. Efa tsy misy teny hafa dia hoe io loha. vaovao androany fa ny fitsarana an’i Milan dia namoaka ny mpifindra monina tsy ara-dalàna izay mody ny zava-mahadomelina toy ny zava-mahadomelina an-tsokosoko dia ny hany loharanon ny sakafo.Na fampiharana ny hafatra ‘raha toa ka tsy moa ve ianao manana asa hafa, ho lainga. Raha natao maimaim-poana avy amin’ny fanoloran-tena sy adidy ny asa sy ny fianakaviana, ary manana ny fahaizana ara-bola ny mifidy ny toerana velona, izay toerana na ny toerana ianao, dia mifidy izany. Na tany Italia sy any ivelany. Henoko mifanohitra valiny ireo izay milaza zavatra iray, ireo izay’ fantatro raha ianao, dia afaka mijanona ao Dubai ao amin ny efitrano fandraisam-bahiny niaraka tamin’ny mpiara-mitory izay tsy ahy, ny sasany dia efa nilaza fa izy ireo no mety ihany koa ny fangatahana ny taratasy fanamarinana ny fanambadiana (na dia tsy izy rehetra aza, indray Vitsivitsy ve ianao, jereo ‘akanjo fampakaram-bady te’ ny fotoana Tena. Tiako ny mijery ireo akanjo fampakaram-bady.DD fanambadiana tsy mahasarika ahy, fa ny fitafiana eny. Izaho ihany koa dia afaka mijery ny fizarana ambany, ary koa ny replicas.DD. Mail, ny Namana tranonkala sy ny tranonkala forum, ny fivoriana sy ny namana manerana an’i Italia, ary maimaim-poana tanteraka. Ho fampahalalana bebe kokoa dia azonao atao ny manoratra ho antsika ny e-mail ny
← Tsara indrindra ny lahatsary amin'ny chat. Roulette, lahatsary rehetra chats amin'ny toerana iray
Campania: Izy dia mitady Azy an-tserasera Niaraka →